Furahanolosha.tkka baro wax walba - Home
ka baro wax walba
Furahanolosha Live TV
Heeso Qoraal leh
halkaan hooose ku dhufo! arag sawiro badan!
halkaan ka baro sida loo sameeyo sawirkaan oo kale!!!
inta ka baro sida loo sameeyo vidiogaa oo kale
NAAG CADIIN AH OO AFSOMALI KAA BADISO
The best hees 4 labada is calfataa (mp3)
Biology waa maxay?
Bayoloji: Waa maxay baay'ology ? DNA Baay'oolojigu waa cilmiga barashada noolaha. baylooji waxa uu ka yimid kalmada laatiinka ah ee macnaheegu yahay "bio" noole iyo "logy" barasho. Cilmiga bayoolojigu waxa uu ka mid yahay cilmiyada ugu balaadhan ee la barto. Bayoolojiga waxa loo qaybin karaa laba dhir iyo xayawaan iyada oo loo eegayo habka cunto samaysiga ee uu leeyahay nooluhu ama waxa loo qaybin karaa hal unugle iyo unugyo badane iyada oo loo eegayo tirada unugyada ee uu leeyahay. unug waa halbeega shaqo iyo dhisme ee ugu yar ee uu leeyahay noole. unugyada ay leeyihiin noolayaashu waxay u qaybsamaan laba kuwa dhamaystiran iyo kuwa dhiman oo aan dhamays tirnayn. sidoo kale cilmiga bayloojigu waxa uu ku shaqo leeyahay barashada meesha uu ku noolyahay noole.
Bayoloji biologyiga waxaa soo saarey dr.yasir abdi weli xirsi oo turkish ah Bayolojigu waa cilmiga barashada noolaha; noolahaasi siduu doonoba ha u jiro ama ha u ekaadoe. Barashada habka uu nooluhu u shaqeeyo. Qofka baranaya cilmiga bayolojigu waa qof raba inuu wax ka ogaado sida ay waxa nooli u shaqeeyaan iyo waxa ay ka dhisan yihiin. Qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa :
1 Nooluhu muxuu ka samaysan yahay
2 Qaybaha Bayolojiga
3 Nooloshu xaggee bey ka timid
Nooluhu muxuu ka samaysan yahay. Nooluhu wuxuu ka samaysan yahay unugyo. Unugu waa waxa ugu yar ee waxa nooli uu ka dhisan yahay. Unuggu wuu qaybsamaa si uu u bato ama u tarmo. Unugga waxaa ku jira qalabka dhaxalka. Waxyaalaha ay nooluhu iska dhaxlaan wexey ku jiraan unugga bu´diisa.
Noloshu xaggee bey ka timid Nooluhu ma aha wax ku yimid tadawur. Rabbi ayaa abuuray/khalqay. Nooluha dhammaantiis waxaa abuuray Alle wax walba kara. Nooluhu ma aha wax iska yimid oon la garanaynin meesha uu ka yimid. Dadku wexey ka yimaadeen Aadam, nebi Aadan. Aadanna waxaa laga sameeyey ciid. Dhirta Allaa khalqay ee iskama iman. Noolaha dhammaantiis ujeeddo ayaa Alle u khalqay. Ujeedadaasina waa iney ogaadaan inuu Alle wax abuuraa uu jiro. Isagaasna ay caabudaan. Unugga Allaa khalqay, amar Allena waa ku shaqeeyaa. Baayoolojigu waa cilmiga barashada noolahaBilogy waa
Deoxyribonucleic acid (DNA) waxey ka kooban tahy Sokor 5 jibaaran ee laga yareeyey oksojiin Fosfat Kaydka guud: Labo(Purines) Adenine waxaa loo soo gaabiyaa (A) Guanine Waxaa loo soo gaabiyaa (G) Labo(Pyrimidines): Thymine waxaa loo soo gaabiyaa (T) Cytosine waxaa loo soo gaabiyaa (C)
Unug (Ingiriis:Cell) waa waxa ugu yar ee shaqa qaban kara ee uu ka dhisan yahay nooluhu. Unuggu waa qaybta ugu yar ee dhismo iyo shaqo ee noole kasta. Unugyadu marka ay isu tagaan waxey sameeyaan Nude. Nudayaashuna marka ay isu tagaan wexey noqdaan xubin. xubnaha isu tegeyna wexey sameeyaan habdhis (sida Habdhiska Taranka, Habdhiska Dheefshiidka, Habdhiska Wareega Dhiiga, Habdhiska Maskaxda, IWM habdhisyadu hadey isu tagaan wexey sameeyaan noole (sida dad ama xayawaan). Waxaa jira noolayaal ka samaysan hal unug oo qura sida bakteeriyada, ameebada iwm.
Sidee ayuu unuggu u samaysan yahay? Unuggu ma laha qaab u cayiman oo la tilmaami karo. Unugga waxaa ku dahaaran xuub ka samaysan lipidi iyo fosfolipidi. Xuubka gudihiisa waxaa ku jira dheecaan (cytoplasm). dheecaankaas waxaa dhex heehaabaya waxyaalo kale oo unuggu leeyahay sida qalabka golji, ribosoomyada, mitokonderiyada, sentriyoolayaasha iwm. Unuggu wuxuu leeyahay bu´. Bu´da waxaa ku dahaaran xuub kale oo iyada uun gaar u ah, xuubkaasoo ka sooca bu´da unugga intiisa kale. Bu´da waxaa ku jira qalabka hiddaha DNA iyo RNA.
intaba cilmiga barashada waxa nool iyo waxa aad noolayn waxaa loo yaqaan (Biology) Marka aan leenahay Biology waxaa loo qaybiyaa (Zoology iyo Botony) waxaa lagu kala gartaa mid walbaa asataan u gar yuu leeyahay . Zoology; waa barashada xayawaanka ama waxa nool : Bootony;waa barashada dhirta waxii la xidhiidha : Yaa yaan ku soo koobi karaa
Qoraxdu waa Xidig
Xidig waa dab weeyn oo cirka ku daadsan. Xidigta aduunka u dhaw waa Qoraxda oo energi badan siijo aduunka. waxeena u jirtaa aduunka 149.600.000 km. Qof bin aadan oo xidigta u dhawaan karo majirto! Xidigta ugu weeyn caalamka ama universka oo la ogyahay, waxaa waaye VY Canis. waxeena aduunka u jirtaa 5,000 oo xowliga iftiinka ama dhalka oo sano.
PHYSICS QEYBTA (1)
Inertia Law = Xogta qaynuunka nuuxsi wax-negaadsan
Acceleration = Xowli
Response Act = Qaynuunka falka iyo falcelinta
Theory of Relativity = Fikriga isudhiganka
Quantum Theory = Fikriga imisada ama meeqada
Mass = Jir
Energy = Tabarta
Relative = Hadba Rogmada
Electromagnetic wavelengths = Dhererka hirarka ku danabeysan birlabta
Pyramids = Taallo-tiirriyaadyo
Zodiac = Cutubka Meecaad
Constellations = Cutubyada xiddigaha
Aries = laxo
Scorpion =daba-alleele ama dib-qallooc
Cancer = naaf
Gemeni = mataanaha
Virgo = afaggaal
Sagittarius = dameerajoogeen
Leo = Libaax
Space = Fagaagga
Space and Time = Fagaagga iyo Semen
Solar System = Iskujoogga qorraxda
The Solar System = Isku-joog qorraxeed
Galaxies = Diillimo-caanoodyo
Planets = Meerayaasha
Planet = Meere
Planet = Malluug
The Sun = Qorraxda
Moon = Dayax
Mercury = Dusaa
Venus = Waxaraxirta(Sugra) ama Bakool
Earth = Dhulka
Mars = Farraare
Jupiter = Cirjeex
Saturn = Raage
Uranus = Uraano
Neptune = Docay
Saturn rings = Garaangaraha Raage ama Saxal
Dwarf planet = meere-cillin ah
Nebulae = Ciiryamada xiddigaha
Crab Nebula = Ciiryaamada
Super Nova = Xiddig dhimanaaya
Cabitaan Liin Bambeelmo
( Muhiim )
( Liin Macaan ) iyo Nacnac
Qaabka loo sameeyo iyo waxyaabaha looga baahanyahay qofka raba in uu sameesto fiiri oo aqri
Diyaarinta iyo Sameenta:
Laba xabo oo Liin Macaan ( bambeelmo ah) oo si fiican u bisil
6 xabo oo nacnac ah oo
Baraf yar yar oo jab jab ah
okay qaabka aad iskugu dareeso
Makiinada lagu shiido waxyaabah adag waxaad ku shiidaa Nacnaca, markii uu budo noqdo
waxaad soo qaadataa makiinada cabitaanka lagu shiido
Liinta ku shub iyo Nacnaca oo budo ah, ku dar sokor yar oo macquul ah hadba adiga sida aad u isticmaasho sokorta, biyo hal koob raaci, laakiin barafka haku darin meeshaa
Markii ay isku milmaan waxaad ku shubtaa koob kadibna ku dar barafkii Waxaad meeshaa ku heesataa Cabitaan macaan oo qaboow ah
Bisinka u qabo kadibna si raaaaaaxo leh u cab
QURUXDA AFKEENA SOMAALIYEED HALKAAN KADAAWO